ကျော်ဟုန်း – ဖမ်းဆီးခံရဆဲ ဗကသ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူ၊ ဝန်းရံပြည်သူတို့ရဲ့ တော်လှန်ကဗျာများ | MoeMaKa Burmese News & Media
ဒီမိုကရေစီပညာရေးစနစ် ပေါ်ထွန်းရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြခဲ့သော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့် ဝန်းရံပြည်သူ များကို လက်ပံတန်းတွင် မတရားဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင်ထားပါသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ ဆန္ဒနှင့်ယုံကြည်ချက်များ ဖော်ကျူးထားသော အချုပ်ထောင်အတွင်းရေးသားခဲ့သည့် ကဗျာများကို မိုးမခပရိသတ်အတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
• ငါတို့ ကျောင်းသား
အသက်၊ သွေးကြွေး ပေးဆပ်
ဟန်နီဦး (ဗကသများအဖွဲ့ ချုပ်)
• ၂၇ နှစ်တိုင် ရွာတဲ့မိုး
အင်းစိန် R.R.T ထဲက သွေးစက်တွေ
ရာဇဝင်မှာ စာမတင်အောင်လို့ တဲ့
ခုထိလည်း တစွေစွေနဲ့ ၊
ကချင်ဆရာမလေး ၂ ယောက်ပေါ် ရွာချ
ကျုပ်တို့ ကသာ မတားနိုင်သေးတာ
သူတို့ မိုးက ကောင်းနေတုန်း။ ။
မင်းသွေးသစ် (ဗကသများ အဖွဲ့ ချုပ်)
အောင်မြင့်ဟန် (ဝန်းရံပြည်သူ )
အရှေ့အနောက်
တောင် မြောက် ညှပ်လို့ 
ပိတ်ဆို့ ရိုက်နှက် ဖန်းဆီးကြ ၊
အာဏာမာန်လည်း မကြောက် ၊
ငါတို့…
မောင်မေတ္တာ ( ABSDF – 209)
=======• အမှောင်ထဲက ကြွေးကြော်သံဆန်တဲ့ ကဗျာ
အမှောင်ထဲမှာပိတ်မိခဲ့ကြ ငါတို့ ဟာ
ငါတို့ မှာ ဝှက်ဖဲ မရှိဘူး၊
ဒီတော့ ခြေပစ်လက်ပစ် ပြုတ်ကျကည်အထိ
ကျမျက်ရည်ချောင်းလို့ ၊ ဦးပုညလို တင်စား မတတ်
ကြင်သူခင်သူ ဇနီးမောင်နှံတွေ၊ မိဘ သားချင်းတွေ
သွေးနဲ့ မျက်ရည်ကိုသာ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။
သာမန်လူတွေထက် ခံနိုင်ရည်ပိုခဲ့တဲ့ ငါတို့ ဟာ
ငါတို့ ခံနိုင်ရည်ထက်ပိုတဲ့ ညှဉ်းပမ်းရေးကိရိယာအောက်
ခံနိုင်ရည် တစက်မှ မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တောင်
ငါတို့ ရဲ့ ခရီးရှည်ချီတက်ပွဲ
ရန်သူရဲ့ ခံတပ်မြို့ တွေ
ငါတို့ဒီမိုကရေစီပင်မစစ်ကြောင်း
မတ်လ တော်လှန်ရေးကို ပြောင်မြောက်စေလိုလည်း
ငါးဆယ်ဝပ် မီးလုံးလေးတွေ လွမ်းမောဖွယ်
ထောင်ထဲမှာပဲ ထောင်တွေ ထပ်ကျခဲ့ရတယ်။
အဆောင်ထဲကနေ တန်းတွေ တိုက်တွေ
နံရံထဲက နံရံတွေ၊ အကျယ်တွေ အကျဉ်းတွေ
ထောင်ထဲမှာပဲ ထောင်တွေ ထပ်ကျခဲ့ကြတယ်။
ရာဇဝင်အိုရဲ့ နုပျိုဆဲ တခါတရံတွေအကြောင်း
တနေ့ တော့ ရယ်ရယ်မောမော
ငါတို့ ပြန်ပြောနိုင်ကြဦးမှာပါ။ ။
(ပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်း ဖြိုခွင်းခံရပြီး ထောင်ထဲအတူတူရောက်လာကြသူများထဲမှ
တိုက်ပွဲဆင်ရင်း ထောင်ထဲတွင် ထောင်ထပ်ကျသော(သို့ မဟုတ်) တိုက်ပိတ်ခံရဲဘော် ၇ ဦးသို့ )
• ဒီမိုကရေစီ ပန်း
သီဟဝင်းတင် (ဗကသများအဖွဲ့ ချုပ်)
• ထောင်ဝင်စာ စကား -၂
ငါ့မှာ ခေါင်းပြူထွက်ခွင့် မရှိ၊
(အလွမ်းတွေ အစာမကြေဘူး မိန်းမရယ်..)။
သမီး ၁၊ သား ၁၊
အိမ်အတွက် မပူနဲ့ ၊
ခင်ဗျား ကျန်းမာရေးပဲ ဂရုစိုက်၊
ယုံကြည်ချက် မပျောက်စေနဲ့ )
• အဖေမသေဘူး သား
ဘယ်တော့မှ မကုန်ပါဘူး သားရေ…
အဖေ ဘယ်တော့မှ မသေဘူး။ ။
မေတ္တာ (ABSDF – 209)
• ၈. ၈. ၈၈ ဥဒါန်း
၈၈ ဟာ အခမ်းအနားတခု မဟုတ်ဘူး
၈၈ ဟာ ပြယုဂ်တခု မဟုတ်ဘူး
၈၈ ဟာ ရောင်းကုန် မဟုတ်ဘူး
၈၈ ဟာ ကမ္ဘာမကြေတဲ့ နေ့ ။
၈၈ မှာ တေးသီငှက်တွေ တေးမသီဘူး
၈၈ မှာ တေးဆိုငှက်တွေ တေးမဆိုဘူး
၈၈ မှာ နိုက်တင်ဂေး ရောက်မလာခဲ့ဘူး
၈၈ မှာ နှလုံးသွေးတွေ ပေတရာပေါ်ရောက်ခဲ့တယ်။
၈၈ မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးတရားတွေ မနာခဲ့ရဘူး
၈၈ မှာ အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်
“ သေနတ်ဆိုတာ မိုးပေါ်ထောင်မပစ်ဘူး၊
ပစ်ရင် မှန်အောင်ပစ်တယ်” ဆိုတဲ့
၈၈ မှာ ကျောင်းတက်ခေါင်းလောင်းသံတွေ မကြားရဘူး
၈၈ မှာ ပစ်..ပစ် သေအောင်ပစ်ဆိုတာတွေပဲ ကြားရတယ်၊
၈၈ မှာ စာအံသံတွေ မကြားရတော့ဘူး
၈၈ မှာ တောက်ခေါက်သံတွေ၊ ငိုညည်းသံတွေပဲ ကြားခဲ့ရတယ်၊
၈၈ မှာ စာသင်ခန်းထဲ ကျောင်းသားတွေ မရှိဘူး
၈၈ မှာ စာသင်ခန်းထဲ သူတို့ ရဲ့ ဝိဥာဉ်တွေပဲ ရှိခဲ့တယ်။
၈၈ နဲ့ ရဟန်း
၈၈ နဲ့ ပြည်သူ
၈၈ နဲ့ ကျောင်းသား
၈၈ ကို ဖျောက်ဖျက်ဖို့ 
၈၈ ကို မေ့ပစ်ဖို့ 
၈၈ ကို ကျောခိုင်းဖို့ 
ဘယ်တော့မှ မစဉ်းစားနဲ့ ၊
ငါတို့ ရဲ့ ရင်ဘတ်ထဲမှာ
ကမ္ဘာတည်သရွေ့ရှိနေမယ်။ ။
အေးအေးခိုင် (သေ့ဘောဘိုး ၂၀၄ )
(ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအတွင်း အသက်ပေးလှူသွားကြသော ရဟန်းရှင်လူ၊ ကျောင်းသား၊ ပြည်သူအပေါင်းအား ဦးညွှတ်အ လေးပြုလျှက်..)
အထက်ပါ ကဗျာများကို ဗန်ကူးဗားဘီစီ၊ ကနေဒါတွင်ကျင်းပသော (၂၇)နှစ်မြောက် ၈၈၈၈ လူထုအရေးတော်ပုံ အခမ်းအနားတွင် ကနေဒါရောက် ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲဘော်ဟောင်းများနှင့် ဒီမိုကရေစီအင်းအားစုများကဖမ်းဆီးခံနေရဆဲ ဗကသအဖွဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊ ဝန်းရံပြည်သူများကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ရွတ်ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပြည်ပရောက် ဒီမိုကရက်တစ်များအနေနှင့် ပြည်တွင်း ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနှင့် တသားတည်းရှိနေခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခံကျောင်း သား၊ ကျောင်းသူများအတွက် စိတ်ဓါတ်ရေးရာ ၊ ယုံကြည်ချက်တူရာကို ပြသလိုခြင်းကြောင့် ရွတ်ဆို ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြခြင်းဖြစ် ကြောင်း အခမ်းအနားကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တဦးမှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:ကဗျာ, မှတ်စုမှတ်တမ်း, ကျော်ဟုန်း